I-China New design 35W UV ye-disinfection light yomakhi wensiza wasendlini nomhlinzeki | Kanfur
1. Izici eziyinhloko zokukhanya kwe-35w UV ukukhanya kwe-UV
Amandla: 110V / 220V
Izinto ze-Tube: Isibani se-Quartz UV
Impilo yesevisi: amahora angu-8000
Umsebenzi: Isikhathi samagiya amathathu (15min, 30min, 60min), ukuqala kokubambezeleka nokulawula okukude okungenantambo okungenantambo.
Amazinga we-plug: ejwayelekile kazwelonke, i-American Standard (isitifiketi se-UL), indinganiso yaseYurophu.
Usayizi: 15 * 15 * 25.5 (CM)
Iwaranti: Iwaranti yezinyanga eziyi-12
2. Imisebenzi nokusetshenziswa kokukhanya kwe-UV kwe-disinfection
Lokhu kukhanya okungaphakathi kwe-UV Ozone disinfection kufanelekile ukuvimbela inzalo, ukubulala amagciwane,
ukususwa kwamaphutha. Ukukhanya kwe-Ultraviolet kungasakazeka kuwo wonke amakhona egumbi, kuhlanze umoya futhi kususe iphunga. Nikeza igumbi lakho indawo yokuhlala enempilo ngama-99.9%
isilinganiso sokuvala inzalo.
Ukukhanya kwe-UV kuthenjiwe ukuthi kuzosetshenziselwa ukubulala amagciwane komoya ngempumelelo kanye nasezimbonini eziningi.
Ikhwalithi ephezulu: Yenziwe ngekholomu yensimbi eqinile yokumelana okuhle kokucindezelwa. Ifanele indawo yegumbi efinyelela ku-30㎡, isikhathi esisebenzayo sokusebenza imizuzu engu-15 endaweni efanayo.
Kunconywa ukuhambisa izindawo ezinomehluko ukuze uthole inzalo engcono.
Ukuphepha: Vala i-timer ngokuzenzakalela ngezilungiselelo zemizuzu engu-15/30/60, ukubambezeleka kwemizuzwana engu-15 ukuqala, ukuqinisekisa ukuthi abantu bahamba ngokuphepha. Isilawuli kude kufaka phakathi ikuvumela uvule / uvale noma usethe isibali sikhathi kude.
Izicelo: Ifanele futhi iyaphatheka ukuthi isetshenziswe ekhaya, esikoleni, ehhovisi, esibhedlela, enkampanini nakwezinye izindawo ezifana negumbi lakho lokulala, igumbi lokuhlala, ikhishi, indlu yangasese…
Qaphela: Lokhu kukhanya kwe-UV kuzokhipha isibani esinamandla kakhulu sokubulala amagciwane. Ukuze izolimaza isikhumba sakho namehlo ngokufana nalapho ushiswa yilanga. 、
Sicela ungahlali eduze kakhulu kulokhu kukhanya uma kuvuliwe (faka isilwane sakho, isitshalo, nabanye.).
Uma lokhu kukhanya kubulala amagciwane, kungahle kuholele iphunga elifana namaqanda abolile, igalikhi, noma izinwele ezivuthayo ...
Kulungile impela, ngoba lelo phunga lisobala ukukhombisa ukuthi ukukhanya kubulala amagciwane futhi lokhu kuzokhipha iphunga liphume emvelweni.
Langaphambilini Ikhaya le-36W Germicidal uv light disinfection
Olandelayo: Isibani esiphathwayo se-ultraviolet isibulali magciwane
air inzalo UV izibani
isibani se-germicidal uvc
ephathekayo UV isibani
isibani segciwane le-ultraviolet
isibani senzalo ye-ultraviolet
UV isibani magciwane
Igumbi lesibhedlela se-uv sterilizer
igumbi lokuhlanza uv
ifektri ukuthengisa ngqo air inzalo 253.7nm ...
Ephathekayo germicidal ultraviolet ukukhanya ozone ste ...
Isibhedlela aphathwayo ephathekayo ultraviolet disinfec ...